स्नातकोत्तर तहका लागि महायज्ञ | गृहपृष्ठ
As of 2018-06-24 11:14:48
API 290 (17) (-5)
BARUN 152 (10) (-3)
BOKL 269 (146) (-5)
BPCL 437 (10) (-7)
CBL 156 (10) (3)
CCBL 165 (222) (-2)
DBBL 128 (312) (1)
EBL 679 (450) (4)
GBBL 180 (300) (-3)
HGI 441 (25) (0)
HPPL 293 (10) (-5)
JBBL 134 (29) (-2)
JSLBB 2960 (2) (0)
KBL 209 (24) (-3)
LLBS 1100 (198) (-5)
MEGA 176 (1893) (-2)
MERO 1065 (14) (15)
NMBMF 1405 (175) (-19)
PFL 130 (10) (-2)
PROFL 150 (255) (0)
SLBS 1580 (50) (0)
SMATA 2139 (12) (-31)
SPDL 124 (15) (-2)
UMB 2005 (80) (-32)
UMHL 164 (14) (-3)
Home शिक्षा स्नातकोत्तर तहका लागि महायज्ञ
शिक्षा 52 views
स्नातकोत्तर तहका लागि महायज्ञ
रू. १ करोडभन्दा बढी सङ्कलन
ताप्लेजुङ (अस) । ताप्लेजुङको पाथीभरा बहुमुखी क्याम्पसमा स्नातकोत्तर तह सञ्चालनका लागि लगाइएको महायज्ञमा रू. १ करोडभन्दा बढी सङ्कलन भएको छ । बुधवार सम्पन्न श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञानमहायज्ञमा दाताहरूले रू. १ करोड ४९ हजार दान गरेको महायज्ञ आयोजक समितिले बताएको छ । यसमध्ये ९६ लाख जम्मा भइसकेको र केही दाताले नाम टिपाएर रकम दिन बाँकी रहेको महायज्ञ प्रचार समितिका संयोजक सजन पौडेलले जानकारी दिए ।
महायज्ञमा विभिन्न व्यक्ति तथा सङ्घसंस्था गरी १ हजार ६ सय ३७ ले दान गरेका थिए । १ नम्बर प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य प्रतापप्रकाश हाङ्गामले सबैभन्दा बढी ३ लाख ३ हजार ३ सय ३३ रुपैयाँ दान गरेको क्याम्पस सञ्चालक समितिका अध्यक्ष गजेन्द्रप्रसाद तुम्याहाङले जानकारी दिए । यस्तै, आधा दर्जन बढीले तुला दान गरेका थिए ।
स्थापनाको २७ वर्षपछि स्नातकोत्तर तहको कक्षा सञ्चालनका लागि पूर्वाधार निर्माणमा रकम जुटाउन गत बुधवारदेखि नै महायज्ञ लगाइएको थियो । सङ्कलित रकम भवन निर्माण, ई–लाइब्रेरी स्थापना, विद्युतीय उपकरण खरीद आदि शीर्षकमा खर्च गरिने बताइएको छ । यो क्याम्पसमा शिक्षा, मानविकी र व्यवस्थापन सङ्कायतर्फ स्नातक तहसम्म पठनपाठन हुँदै आएको छ ।
यसै वर्षदेखि शिक्षा सङ्कायतर्फ स्नातकोत्तर तहका कक्षा सञ्चालनका लागि स्वीकृति लिन त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा निवेदन गरिएको क्याम्पस प्रमुख मोहनकुमार राईले जानकारी दिए । हरेक वर्ष स्नातक तह उत्तीर्ण गरी जिल्लाबाहिर जानुपर्ने विद्यार्थीको बाध्यता हटाउन स्नातकोत्तर तह सञ्चालन गर्न लागिएको क्याम्पसले बताएको छ । सामाजिक विकासका लागि रकम जुटाउने उद्देश्यले लगाइएको महायज्ञ जिल्लामा यो नै पहिलो हो ।
१० असार २०७५, आईतवार १०:०६
तस्वीरमा न्यूबिज बी–स्कूल रेटिङ–र्‍याङ्किङ अवार्ड–२०१८
१० असार २०७५, आईतवार ०९:००
दिवाखाजा कार्यक्रमले बढे विद्यार्थी
८ असार २०७५, शुक्रबार ०७:४०
देशभरका उत्कृष्ट कलेजहरुबीचको अवार्ड कार्यक्रम, चौथो न्यूबिज बिजनेश स्कूल रेटिङ–र्‍याङ्किङ अवार्ड २०१८ हुँदै
७ असार २०७५, बिहीबार १०:०९